एक विस्तारित प्रोस्टेट को लागी आहार सल्लाह
समय: 2019-10-17 दृश्य:
प्रोस्टेट मूत्राशय र लिंग को बीच मा स्थित एक अखरोट आकार को ग्रंथि हो. प्रोस्टेट मात्र मलाशय को अगाडि छ. मूत्रमार्ग प्रोस्टेट को केन्द्र को माध्यम बाट चल्छ, मूत्राशय देखि लिंग सम्म, पिसाब शरीर बाट बाहिर जान दिनुहोस्. प्रोस्टेटले तरल पदार्थ गुमाउँछ र शुक्राणुलाई पोषण दिन्छ. स्खलन को समयमा, प्रोस्टेट यो तरल पदार्थ को मूत्रमार्ग मा निचोल्छ, र यो वीर्य को रूप मा शुक्राणु संग निष्कासित छ.
प्रोस्टेट वृद्धि लगभग सबै पुरुषहरु लाई प्रभावित गर्दछ 50 सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी वा को रूप मा जानिन्छ बि पि एचName. कठिनाई पेशाब को लक्षण उमेर संगै बढ्न जान्छ.
यस लेखमा, BPH को लक्षणहरु लाई कम गर्न को लागी केहि आहार सुझावहरु जान्नुहोस्.
आहार र एक विस्तारित प्रोस्टेट
प्रोस्टेट ग्रंथि शक्तिशाली हार्मोन द्वारा नियंत्रित गरिन्छ सेक्स हर्मोन को रूप मा जानिन्छ, टेस्टोस्टेरोन सहित.
प्रोस्टेट ग्रंथि मा, टेस्टोस्टेरोन dihydrotestosterone भनिन्छ अर्को हार्मोन मा रूपान्तरण हुन्छ (DHT). DHT को उच्च स्तर को कारण प्रोस्टेट मा कोशिकाहरु लाई विस्तार गर्न को लागी.
केहि खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थहरु को टेस्टोस्टेरोन र अन्य हार्मोनहरु मा उनीहरुको प्रभाव को कारण प्रोस्टेट स्वास्थ्य मा एक प्रभाव छ भनेर थाहा छ।.
अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि मुख्य रूप मा मासु वा डेयरी उत्पादनहरु को एक आहार प्रोस्टेट वृद्धि र क्यान्सर को जोखिम बढाउन सक्छ। यो विशेष गरी साँचो हो यदि एक व्यक्ति आफ्नो आहार मा पर्याप्त तरकारीहरु लाई शामिल गर्दैन.
खाना खान को लागी
फलफूलमा धनी आहार, तरकारीहरु, र स्वस्थ बोसो प्रोस्टेट को रक्षा को लागी सोचेको छ.
प्रोस्टेट को लाभ को लागी ज्ञात विशिष्ट खानाहरु मा शामिल छ:
सामन: सामन स्वस्थ वसा मा धनी छ कि ओमेगा-एस हुन्छ फ्याट्टी एसिड, जो रोकथाम र सूजन कम गर्न मद्दत गर्दछ शरीर भित्र. अन्य चिसो पानी माछा, जस्तै सार्डिन र ट्राउट, यो प्रकार को बोसो मा धनी छन्.
टमाटर: टमाटर लाइकोपीनले भरिएको हुन्छ, एक antioxidant कि प्रोस्टेट ग्रंथि को कोशिकाहरु लाई लाभ उठाउन सक्छ. टमाटर पकाउने, जस्तै टमाटर सस वा सूप मा, लाइकोपीन रिलीज गर्न र यो शरीर को लागी अधिक सजीलो उपलब्ध गराउन मा मद्दत गर्दछ.
बेरी: स्ट्रबेरी, ब्लुबेरी, रास्पबेरी, र blackberries antioxidants को उत्कृष्ट स्रोत हो, जसले शरीर बाट मुक्त कण हटाउन मद्दत गर्दछ. मुक्त कण प्रतिक्रियाहरु को byproducts हो कि शरीर भित्र हुन्छ र समय र क्षति र रोग को कारण हुन सक्छ.
ब्रोकली: ब्रोकोली र अन्य cruciferous तरकारीहरु, bok choy सहित, फूलगोभी, ब्रसेल्स अंकुरण, र गोभी, सल्फोराफेन नामक रसायन हुन्छ. यो क्यान्सर कोषहरु लाई लक्षित गर्न र एक स्वस्थ प्रोस्टेट लाई बढावा दिन सोचेको छ.
नट: नट्स जस्ता मा धनी छन्, एक ट्रेस खनिज. जिंक प्रोस्टेट मा उच्च सांद्रता मा पाइन्छ र टेस्टोस्टेरोन र DHT सन्तुलन मा मद्दत गर्न सोचेको छ. पागल बाहेक, शंख र फलफूल पनि जस्ता मा उच्च छन्. मिश्रित पागल किराना पसलहरु मा खरीद को लागी उपलब्ध छन् र अनलाईन.
सिट्रस: सुन्तला, कागती, चूना, र अंगूर फल भिटामिन सी मा उच्च छन्, जो प्रोस्टेट ग्रंथि को रक्षा गर्न मद्दत गर्न सक्छ.
प्याज र लसुन: एउटा अध्ययन भेटियो कि BPH संग पुरुषहरु कम लसुन र प्याज कि BPH बिना पुरुषहरु लाई खान को लागी प्रवृत्ति पाईयो. अधिक अनुसन्धान यी नतिजाहरु को पुष्टि गर्न को लागी आवश्यक छ, तर प्याज र लसुन धेरै आहार को लागी स्वस्थ अतिरिक्त हो.
एक बढेको प्रोस्टेट को लागी एक स्वस्थ आहार मात्र राम्रो खाना खाने भन्दा बढी छ. यसको अर्थ अन्य प्रकारका खाद्य पदार्थहरु बाट बच्नु हो जो प्रोस्टेट को लागी राम्रो छैन.
केहि खानाहरु बाट बच्न को लागी शामिल छ:
रातो मासु: Reserch सुझाव दिन्छ कि रातो मासु मुक्त जाँदै प्रोस्टेट स्वास्थ्य सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ. वास्तबमा, दैनिक मासु खपत जोखिम तीन गुना विश्वास गरिन्छ प्रोस्टेट वृद्धि को.
दुग्ध: यस्तै मासु को लागी, डेयरी को नियमित खपत जोडिएको छ BPH को एक बढि जोखिम को लागी. Cutting out or reducing butter, cheese, and milk may help reduce BPH symptoms.
avoiding medications that can worsen symptoms, such as antihistamines, मूत्रवर्धक, and decongestants if possible
अघिल्लोपछाडि दुखाइ राहत आहार सल्लाहहरू
अर्कोप्रोस्टेट-विशिष्ट एन्टिजेन (पीएसएName) रगत जाँच